Andininy sasantsasany, notsongaina avy ao amin’ny Baiboly,
Jehovah no Andriamanitra any amin’ny lanitra ambony sy etỳ amin’ny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy Izy.
Deoteronomia 4 and 39
Ilay nanao ny tany tamin’ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin’ny fahendreny ary namelatra ny lanitra tamin’ny fisainany.
Jeremia 51 and 15
Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; henika ny zavatra nataonao ny tany.
Salamo 104 and 24
Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara Azy.
Jaona 1 and 18
Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy amin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika.
Titosy 3 and 4
Romana 5 and 8
Fa fahafatesana no tambin’ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa Tompontsika.
Romana 6 and 23
Fa ankehitriny Izy (Andriamanitra) mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka.
Asan’ny apostoly 17 and 30
Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra.
1 Jaona 1 and 9
Fa ankehitriny kosa, ao amin’i Kristy Jesoa, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken’ny ran’i Kristy. Fa Izy no fihavanantsika.
Efesiana 2 and 13-14
Tompo ô, Ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny, nanavotra ny aiko Ianao.
Fitomaniana 3 and 58
Ary ankehitriny, inona no andrasako, Tompo ô? Ianao no antenaiko.
Salamo 39 and 7
Ampianaro ny làlanao aho, Jehovah ô! Dia handeha amin’ny fahamarinana aho; ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.
Salamo 86 and 11
Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho.
Salamo 16 and 1
Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao amin’ny lalànao.
Salamo 119 and 18
Ampitoero eo amin’ny teninao ny diako.
Salamo 119 and 133
Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa Ianao no Andriamanitro.
Salamo 143 and 10
Fa izay mihaino Ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, eny, handry feizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy.
Ohabolana 1 and 33
Izay miray amiko, ary Izaho aminy,dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.
Jaona 15 and 5
Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, haren’ny famonjena sy fahendrena ary ny fahalalana; ny fahatahorana an’i Jehovah no rakitrao.
Isaia 33 and 6
Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany.
Jeremia 29 and 11
Tsy ho menatra izay miandry Ahy.
Isaia 49 and 23
Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy.
Nahoma 1 and 7
Ankino amin’i Jehovah ny làlanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka… Miantombena tsara miandry an’i Jehovah ianao ka manantenà Azy.
Salamo 37 and 5, 7
Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin’ny finoanareo, mba hitomboanareo amin’ny fanantenana noho ny herin’ny Fanahy Masina.
Romana 15 and 13
Mba hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy ain’ny Fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin’ny asa tsara rehetra.
Kolosiana 1 and 9-10
Koa tahaka ny nandrasainareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarina anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana.
Kolosiana 2 and 6-7
Aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an’i Jesoa, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy.
Hebreo 12 and 1-2
Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesoa Kristy Tompo, Izay hanova ny tenan’ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ny tenan’ny voninahiny.
Filipiana 3 and 20-21
Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika.
Titosy 2 and 13-14
Fa rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra.
Hebreo 10 and 37
Ho an’Izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny rany… ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena.
Apokalypsy 1 and 5-6